သဘောတူညီချက်အသစ်အရ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ Daraa ပြည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားများ ထွက်ခွာလျက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဒမတ်စကပ်၊ ဩဂုတ် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကာလကြာရှည် တင်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ရုရှားနိုင်ငံက ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးသော သဘောတူညီချက်အရ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Daraa ပြည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားများအား နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ သူပုန်များ ထိန်းချုပ်ထားသောနယ်မြေများသို့ ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် သတင်းအေဂျင်စီ SANA က သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။Daraa ပြည်နယ်ရှိ ဆီးရီးယား အာဏာပိုင်များနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် လက်နက်ကိုင် အမျိုးသား ၄၅ ဦးနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်အချို့တို့သည် ဘတ်စ်ကားများဖြင့် ဆီးရီးယား မြောက်ပိုင်းသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း Daraa ပြည်နယ်တွင် ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်၌ ဒေသခံ လက်နက်ကိုင်အမျိုးသားများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)
အဆိုပါ ရွှေ့ပြောင်းမှုသည် Daraa ပြည်နယ်ရှိ လုံခြုံရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန် သဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူ လက်နက်ကိုင်များသည် ဒုတိယအသုတ်ဖြစ်ကြောင်း ဆီးရီးယားနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းရှိ သူပုန်များထိန်းချုပ်ထားရာနယ်မြေများအတွက် Daraa ပြည်နယ်မှ လက်နက်ကိုင်အမျိုးသား ၁၀၀ ထွက်ခွာရန် ဆီးရီးယား အာဏာပိုင်များက အလိုရှိကြောင်း သတင်းက ဖော်ပြထားသည်။
Daraa ပြည်နယ်တွင် လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားများ ရွှေ့ပြောင်းရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် ၄၈ နာရီကြာ သဘောတူညီမှုသည် ဩဂုတ် ၂၄ ရက်က စတင်အသက်ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံ စစ်တပ် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ရွှေ့ပြောင်းရေးအတွက် ပြင်ဆင်ရန် Daraa al-Balad နယ်မြေရှိ အနီးဝန်းကျင်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
ယင်းသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြီးနောက် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူများ ပြန်လာရေး အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြားမှ ဆီးရီးယား အစိုးရ၏ အဖွဲ့အစည်းများ Daraa သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် Daraa ပြည်နယ် al-Balad နယ်မြေနှင့် အနီးဝန်းကျင်နေရာများတွင် ဒေသတွင်း ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူ အရေအတွက်မှာ အမျိုးသမီး ၁၅,၀၀၀ နီးပါးနှင့် ကလေး ၂၀,၄၀၀ ကျော် အပါအဝင် ၃၈,၆၀၀ နီးပါး ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (OCHA) က ဖော်ပြထားသည်။
Idlib ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ သူပုန်များထိန်းချုပ်ထားရာ နယ်မြေများသို့ သူပုန်များ ရောက်ရှိသွားပြီးနောက် ဆီးရီးယားစစ်တပ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က Daraa ပြည်နယ်သို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မကြာခဏ တိုက်ခိုက်မှုများဖြစ်ပွားဖြစ်ပွားလျက်ရှိသဖြင့် Daraa ပြည်နယ်တွင် တင်းမာမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
DAMASCUS, Aug. 26 (Xinhua) — A batch of local armed men from Syria’s southern province of Daraa were evacuated on Thursday to the rebel-held areas in northern Syria underaRussian-mediated deal to defuse months-long tension, the state news agency SANA reported.
A total of 45 armed men and some of their family members left by buses for northern Syria after they refused to reconcile with the Syrian authorities in Daraa, said the SANA report.
The evacuation is part ofadeal to restore security in Daraa, it said.
On Aug. 24,a48-hour truce went into force in Daraa to prepare for the evacuation of the armed men. Russian military police entered the neighborhoods in Daraa al-Balad area to prepare for the evacuation.
The Syrian army entered Daraa in 2018 after the rebels there were dislodged to the rebel-held areas in the northwestern province of Idlib. However, the tension has continued in Daraa with attacks taking place occasionally. Enditem
Photo : Local armed men are seen onabus in Syria’s southern province of Daraa, on Aug. 26, 2021. A batch of local armed men from Syria’s southern province of Daraa were evacuated on Thursday to the rebel-held areas in northern Syria underaRussian-mediated deal to defuse months-long tension, the state news agency SANA reported. (Str/Xinhua)
ဟွာဝေးက အီသီယိုးပီးယား ICT ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများအား ဆုချီးမြှင့်